VirnetX na-azọrọ Apple nde 532 maka imebi ikike dị iche iche | Esi m mac
VirnetX na-azọrọ Apple nde 532 maka imebi ikike dị iche iche
Dabere na ozi sitere na ụlọ ọrụ Bloomberg, anyị maara na ndị ọka iwu nke ụlọ ọrụ VirnetX gbara akwụkwọ ikpe megide Apple ụnyaahụ uru 532 nde dollar nke infring a usoro nke nchọpụta Kemịkalụ metụtara ala nkwukọrịta na netwọk.
Ndị ọka iwu VirnetX agawala na-akpasu iwe site n'otu ụbọchị iji wakpo Apple na-ekpezi usoro iwu eme ndokwa maka izu na-abịa n'ihu Texaslọikpe Ọwụwa Anyanwụ nke Texas Texas. N'okwu Brad Caldwell, onye ọka iwu VirnetX: “Apple emeghị ihe ziri ezi. Ha ewerela ihe ọgụgụ isi nke VirnetX na-enweghị ikike.
Nke a abụghị oge mbụ ụlọ ọrụ a gbara Apple akwụkwọ na patent, dịka n'oge 2012 ndị juri na Texas hụrụ na FaceTime gụgharia usoro dabere na VPN patent nke VirnetX nwere. Nke a rụpụtara na Apple na-enye iwu ịkwụ ụgwọ ngụkọta nke $ 386,2 nde na VirnetX ọ bụ ezie na n'ikpeazụ ọ gaghị eme ya Federallọikpe Mkpegharị Ikpe nke Federal echere atụmatụ arịrịọ Apple gbara na Septemba afọ ahụ.
Agbanyeghị Apple abụbeghị naanị ụlọ ọrụ dị na nlegharị anya nke VirnetX, ebe ọ bụ na Microsoft ga-emesokwa ha ihe site na iru nhazi nke ụlọ ikpe nke ọ kwụrụ ụlọ ọrụ ngụkọta nke $ 200 nde tinyere 23 nde maka patent ọzọ eji na Skype.
Ugbu a ọ dị ka VirnetX chọrọ ịkatọ Apple maka otu ihe ahụ ọ bụ ezie na otu arụmụka enweghị ike iweta ya ọzọ na ikpe ọhụụ. Ọtụtụ Ha na-ekwu maka nkwekọrịta ọzọ dị ka o mere na Microsoft mana ugbu a ọ nweghị ihe ekwenyela. Mgbe mkpebi mbụ nke Courtlọikpe Federal, Apple gbanwere usoro ikpo okwu FaceTime ya iji zere mmebi iwu ọhụrụ ọ bụ ezie na VirnetX na-aga n'ihu na-ekwu na mgbanwe ndị ahụ ezughị iji were dị ka afọ ojuju.
Ọnwụnwa ọhụrụ ahụ gụnyere ngwa dịka FaceTime, iMessage na ndị ọzọ na netwọk atụmatụ wuru n'ime sistemụ arụmọrụ Apple dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » VirnetX na-azọrọ Apple nde 532 maka imebi ikike dị iche iche
Ozi niile na iOS 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 na tvOS 9.2
Gịnị mere ị ga-ahụ n'anya inwe Mac